आत्महत्याको सोँच आउन नदिन के गर्ने ? यस्तो छ त्रिवि शिक्षण अस्पतालका मनोचिकित्सकको सुझाव ! | Diyopost
आत्महत्याको सोँच आउन नदिन के गर्ने ? यस्तो छ त्रिवि शिक्षण अस्पतालका मनोचिकित्सकको सुझाव !
काठमाडौँ, असार १० । कोरोनाभाइरसको महामारिसँगै नेपालमा आत्महत्याको दर सामान्य बढेको पाइएको छ । पछिल्लो समय कोरोरनाभाइरसको कारण क्वारेन्टिन तथा आइसोलेशनमा बसेकाहरुले नै आत्महत्या गर्ने दर बढेपछि चौतर्फी बहसको बिषयमा बनेको छ । मानिसहरु विभिन्न समस्याका र त्यसलाई झेल्न नसकेको कारण आत्महत्या रोज्ने गर्दछन् ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालका मनोचिकित्सक प्रा.डा. सरोज प्रसाद ओझाका अनुसार २० देखि ४० बर्षका युवायुवतीहरुमा मनोवैज्ञानिक कारणले आत्महत्या रोज्ने गरेको बताएका छन् । कोरोनाभाइरसको महामारीको कारण आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या, पारिवारिक समस्या, आफन्त गुमाउनुपर्दाको पीडा आदी समस्याहरु झेल्न नसक्दा आवेसमा आएर आत्महत्या रोज्ने गरेको डा. ओझाले बताएका छन् ।
आत्महत्या गर्ने व्यक्तिको मनोविज्ञानमा आफ्नो अस्तित्व आफैलाई स्वीकार नहुने, आफुलाई बेकार सोँच्ने, बाँच्नुको अर्थ नदेख्ने आदी सोँचहरु आउने हुन्छ । यस्ता व्यक्तिहरुले आत्महत्या गर्नुअघि केही लक्षण अथवा सिग्नल दिने पनि डा.ओझाको भनाई छ । केही ब्यक्तिहरु डोरी किन्न जाने, कीटनाशक औषधी खोज्ने, नकारात्मक कुराहरु बढी गर्ने, एक्लै बस्न रुचाउने इत्यादी हुन्छन् ।
समयमै पहिचान गर्न सकेको खण्डमा त्यस्ता ब्यक्तिहरुलाई आत्महत्या गर्नबाट रोक्न समेत सकिने डा. ओझाले बताएका छन् । उनिहरुलाई सान्त्वन दिने, मनमा लागेको कुराहरु बोल्न दिने, उनिहरुको सबै कुरा सुनिदिने, सकारात्मक कुराहरु बताउने, हौसला दिने, ढाडस दिने, सकिन्छ भने मनोचिकित्सकहरुसँग परामर्शको लागि पठाउने तथा सामान्य उपचार बाट आत्महत्याको सोचाई चाँडै हटाउन सकिने डा. ओझाले बताए । यस्तो महामारीको कारण उत्पन्न भएको ‘रियाक्टिभ डिप्रेशन’ औषधीको प्रयोगबिना पनि ठिक पार्न सकिने उनले बताए ।
आत्महत्याको मुख्य कारण मानसिक तनाव र नकारात्मक सोँच हो । सकारात्मक सोँचका लागि मानिसले आफ्नो दैनिक जीवनशैलीलाई पनि विशेष ध्यान दिनुपर्दछ । डा. ओझाका अनुसार लकडाउन, क्वारेन्टिन अथवा आइसोलेशनमा बसेका व्यक्तिहरुले अझ रुटिन नै बनाएर आफ्नौ दैनिकीलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । ठिक समयमा सुत्ने र ठिक समयमा उठ्नाले पनि शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको वृद्धी हुन्छ । सामान्य व्यक्ति दैनिक ७ देखि ८ घण्टासम्म आरामले ससत्न सकेको खण्डमा प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्छ ।
सन्तुलित भोजनले पनि मानिसमा सकारात्मक सोँचको विकास गराउँछ । विशेषगरि भिटामिन सी युक्त खानेकुराहरु खाने, घामबाट प्राप्त हुने भिटामिन डि लिने, सागपात, फलफुल लगायतका खानेकुराहरुको सेवन गर्नाले शरिरमा प्रतिरोधात्मक क्षमताको वृद्धी भई नकारात्मक विचारहरु आउन दिँदैन । नियमित व्यायम, योगा र ध्यान गर्ने गर्नाले दिमागमा नकारात्मक कुराहरुले स्थान पाउँदैन ।
हाम्रै कृयाकलापले सोँचहरुको बिकास गर्ने हो । नकारात्मक सन्देश दिने समाचारहरु नहेर्ने, आफ्नो आत्मबल वृद्धी गर्ने लगायत आफ्नै लागि पनि केही सकारात्मक सोँचेको खण्डमा आत्महत्या जस्तो अत्यन्तै नकारात्मक सोँच आउँदैन ।
(बुधबार स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमार्फत त्रिवि शिक्षण अस्पतालका मनोचिकित्सक प्रा.डा. सरोज प्रसाद ओझाले दिएका सन्देशको संपादित अंश )